थाहा खबर: कोरोना संक्रमित र भर्खरै कोरोना संक्रमणमुक्त भएकाले दशैँमा कस्तो खानेकुरा खाने?
काठमाडौं : कोरोनाको दोस्रो लहर कम भएसँगै दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै आएको छ। हाल कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान तीव्ररूपमा अघि बढेको अवस्थामा पनि पूर्ण खोप लगाएकाहरू पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्।
कोरोना संक्रमित भएका र संक्रमणमुक्त भएकाहरूले दशैँमा सकेसम्म खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दशैँ भन्नेबित्तिकै मासु र विभिन्न परिकार खाएर हर्षोल्लासका साथ मनाउने चाड भनेर बुझिन्छ।
अहिले कोरोना संक्रमित यतिखेर होम आइसोलेशन वा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा छन्। कोरोना संक्रमण भएकाहरूले दशैँमा त्यस्तो अरू स्वस्थ मानिसभन्दा बेग्लै किसिमको खाना खानु पर्दैन। सामान्य स्वस्थ मानिसले झैँ मासु वा अन्य परिकार खान सकिन्छ तर धेरै चिल्लो, बोसोयुक्त र मसला हालेको मासु सकेसम्म नखाँदा उचित हुन्छ।
कोरोना संक्रमितमा उच्च रक्तचाप, सुगर, हाइ कोलस्ट्रोल जस्तो समस्या छ भने दशैँको खानपानले समस्या निम्त्याउन सक्छ। साथै दशैँका वेला हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानपान गर्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। झोल खानेकुराहरू प्रशस्त, सागपात र फलफूल खाँदा राम्रो हुन्छ।
सबै खानेकुरा मिलाएर सन्तुलित भोजन गर्नु नै कोरोनाविरुद्ध आफ्नो शरीरको लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपाय हो।
सकेसम्म समयमा सुत्ने र थोरै थोरै खानेकुरा खाइरहने गर्नुपर्छ। सकभर झोलिलो खानेकुरा, धेरै तेलमा तारेको भुटेको खानेकुरा नखाएको राम्रो हुन्छ। भर्खरै कोरोना संक्रमणमुक्त भएकाहरूले सकेसम्म माछामासुभन्दा हरियो सागपात‚ फलफूल र सलादमा जोड दिँदा राम्रो हुन्छ। भाइरससँग लडेर शरीर शिथिल भइरहेको हुन्छ। यस्तो वेला सकेसम्म शरीरले सजिलै पचाउन सक्ने खानेकुरा खाएको राम्रो हुन्छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
लिभरपुलको शतप्रतिशत जित, एट्लेटिको नकआउटमा